Ny tantara foronina foronina tsara indrindra
Hevitra momba ny foronina noforonina momba ny siansa
Bewilderment, nataon'i Richard Powers
Tsy mifanaraka amin'ny feon'izao tontolo izao ary noho izany ny fisafotofotoana (miala tsiny amin'ny vazivazy). Manakaiky ny dystopia satria lavitra loatra ny utopia ho an'ny sivilizasiona toa antsika izay mitombo be ny isa rehefa mihena ny maha-izy azy. Ny maha-izy azy dia voajanahary amin'ny maha-izy azy. ...
Zazalahy sy ny alikany eo amin'ny faran'ny World, nataon'i CA Fletcher
Ny angano aorian'ny apokaliptika dia miteraka endrika roa sosona amin'ny fanimbana tanteraka ary manantena ny fahaterahana indray. Amin'ity tranga ity, Fletcher dia misarika ihany koa ny kisarisary mahazatra izay manazava ny fomba nahatongavany tamin'io toerana hafahafa io izay tompon'andraikitra amin'ireo sisa velona dia miandraikitra ny fananganana ny tontolony ...
Avelao any aoriany izao tontolo izao, nataon'i Rumaan Alam
Ny fandosirana mankany Long Island dia tsy ampy mihitsy raha tsy misy dikany. Azonao atao ny manararaotra raha manandrana manadino ny adin-tsaina fotsiny ianao aorian'ny ady mafy iray herinandro any New York City; fa tetika ratsy raha faran'izao tontolo izao, apokalypsa na ...
Manatona… Ny minisiteran'ny ho avy, Kim Stanley Robinson
Avy amin'ny Ministeran'ny Fitiavana an'i George Orwell ka hatramin'ny Minisiteran'ny Fotoana, ny andiany farany izay nandresy tamin'ny TVE. Ny fanontaniana dia ny fampifandraisan'ny ministera ny dystopian, ny lafiny futuristic ary ny teboka mahatsiravina ... Ho raharahan'ny minisitra amin'ny asa maizina voatendry ao anaty kitapom-bolany ... Ny ...
Noana, nataon'i Asa Ericsdotter
Ny fientanam-po sy ny fahatsarana dia dystopias amin'ny zavatra mety ho tonga. Satria ny fomban'ny dystopiana dia manana singa sosiolojia lehibe foana. Izy rehetra dia niatrika ny lamandy vaovao tamin'ny fanandramana fikomiana sy ny fandefasana tahotra. Manomboka amin'ny George Orwell mankany Margaret Atwood, mpanoratra manoratra maro be ...
Oryx sy Crake, nataon'i Margaret Atwood
Ny famoahana tantara foronina siansa manome hevitra dia miasa amin'ny tsy fisian'ny tantara vaovao ahafahana mamelona sary an-tsaina eo anelanelan'ny dystopian sy post-apocalyptic mifanaraka amin'ny fotoana. I Margaret Atwood ihany no tsy mpanoratra tantara foronina amin'ny siansa mahazatra. Ho azy, miaraka amin'ny hevitra misimisy kokoa ny sary ...
The Anomaly, nataon'i Hervé Le Tellier
Ny sidina dia tany (na ny lanitra) novolena ho an'ny tombantombana amin'ny siansa mahavariana. Ny iray dia tsy mila mahatadidy afa-tsy ny angano momba ny Triangle Bermuda, izay vetivety dia nitelina ny sambo toy ny mpiady, na ny langoliers an'ny Stephen King izay nandrava ny tany...
Ho rendrika amin'ny ranomason-dreniny izy ireo, avy amin'i Johannes Anyuru
Tsy dia toy izany ny science fiction indraindray. Ary mahaliana ihany koa raha ny momba ny loharanom-baovao, ny fijanonana na ny fialantsiny tsotra. Ho an'ny mpanoratra Johannes Anyuru, nidina tao amin'ilay tantara niaraka tamin'ny fanahin'ny mpikaroka izay mahazatra ny toe-pahasalamany ho poeta mitambatra, ny hevitra dia ny mamerina ...
pejy1 pejy2 ... pejy7 manaraka →